Abaalmarinta Caddaaladda - Argagixisnimo Loo Raadinayo - Ali Sayyid Muhamed Mustafa al-Bakri
Ali Sayyid Muxamed Mustafa al-Bakri waa qof ka tirsan ururka al-Qa’ida waana khabiir aqoon u leh hubka kiimikada. Wuxuu ka tirsan yahay golaha Odeyaasha al-Qa’ida wuxuuna aad ugu xiran yahay hoggaamiyeyaasha al-Qa’ida Saif al-Adel iyo Ayman al-Zawahiri.
Intii aannu ku biirin al-Qa’ida, al-Bakri wuxuu ka tirsanaan jiray ururka argagixisada Masaarida ee Islamic Jihad, oo uu hoggaamin jiray Ayman al-Zawahiri. Wuxuu macallin ka ahaa xerooyinka al-Qa’ida ee Afghanistan, wuxuuna qori jiray argagixisada isagoo siin jiray tababar ah sida loo isticmaalo waxyaabaha qarxa iyo hubka kiimikada. Al-Bakri waxay kaloo si aan lagu guuleysan isugu dayeen in ay afduubaan Duulimaad raakaabka qaado ee laga leeyahay dalka Pakistan bishii Diseemabr 2000. Waxay u badan tahay in uu weli tababar siiyo argagixisada al-Qa’ida dadka xag jirka ah.
Taariikhda Dhalashada: Abriil 18, 1966
Goobta Dhalashada: Bani Suwayf, Masar
Magacyada La Sheegto: Abd al-Aziz al-Masri, Xasan ‘Umar
Ibrahim Ali Saleem Abu Salsbil, Abu Salsabil Xassan Omar, Xasan ‘Umar Zizo